Archive du 06-août-2021
Raharaha Appolo 21 Nanao ampamoaka goavana i Sareraka
Niporitsaka ny horonam-peon-dRandriazanakolona Yvon na Sareraka izay voalaza fa nandritra ny fanadihadiana natao azy noho izy voasaringotra tamin’ny raharaha fikasana hamonoa ny Filoha Rajoelina na ilay raharaha « Appolo 21 ».
FIARA ANY ETAZONIA HO ELETRIKA SY HYBRIDE NY 50% HATRAMIN’NY 2030
Mirona betsaka any amin’ny tontolon’ny Indostria maitso ny Filoha Amerikanina Joe Biden. Ho an’ny famokarana fiarakodia,
Mpisolovava an’I Paul Rafanoharana “Mety ho olomangam-pirenena ny olona arovanay!”
Nanamafy tetsy amin’ny biraon’izy ireo etsy Ankadifotsy omaly ireo mpisolovava ilay mpandraharaha voarohirohy ao anatin’ny raharaha fifofoana aina mpitondra ambony eto Madagasikara,
Paul Rabary « Tsy vitan’ny vahaolana maimaika ny fiainam-bahoaka”
« Mbola hihamafy anie ny krizy eto e, isika manafatra entana foana. Rehefa ny vahoaka no diso fanantenana amin’ny mpitondra dia izay no miteraka tsy fitoniana.
Tarika Mahaleo Nandao ihany koa I Charles
Misaona indray ny tarika Mahaleo satria dia nodimandry omaly teo amin’ny faha 67 taonany I Charles Bert Andrianaivo, fantatry ny mpankafy ny tarika Mahaleo amin’ny hoe Charles.
Ny vola tsy maha mpihavana tokoa!
Raha zohiana amin’ny zava-misy sy ny toe-javatra miseho, dia mbola mirona bebe kokoa hatrany any amin’ny hoe : ady an-tranon’ny samy mpiray petsapetsa
Roland Ratsiraka “Ahiana ho famotsiam-bola io fond souverain io”
Nampidirina tao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny Antenimieram-pirenena ny fandaniana ny fanaovana « Fond souverain»,
Vato sarobidy tratra tao Toamasina Nisy nanondrana ny kaontenera iray kaontenera?
Mandeha ny resaka amin’izao fotoana izao, fa nisy nanondrana ny iray tamin'ireo kontenera 8 nahitana varo sarobidy tao Toamasina sarona ny 18 jolay lasa teo.
Seranan-tsambo 7 eto Madagasikara 41 isa monja no sambo afaka nandalo
41 isa monja no sambo afaka nandalo tao amin’ireo seranan-tsambo iraisam-pirenena miisa 7 eto Madagasikara nandritra iny volana jolay iny.
RN13 Tafapetraka ny tetezana ao Manambaro
Mandroso ny asa fanamboarana ny làlana miodina (déviation définitive) any amin'ny tetezan'i Manambaro eo amin'ny reniranon'i Efaho amin'ny làlam-pirenena faha-13,
Faritra Betsiboka Nidinan’ny minisitry ny filaminam-bahoaka ifotony
Taorian'ny fidinana ifotony nataon'ny tale jeneralin'ny polisim-pirenena tany amin'ny faritra Melaky sy Menabe iny dia nitsidika ny faritra Betsiboka
Fanafihan-dahalo tany Anahidrano Fokonolona 3 naratra, iray nisy namira tamin’ny antsy
Nitrangana fanafihan-dahalo tao Antatatra, Kaominina Anahidrano, Distrikan' Antsohihy afak’omaly Alarobia 04 Aogositra nifoha omaly Alakamisy.
Rafanomezantsoa Jean Nirina Zanak’olona sahirana fa nanam-piniavana
Tsy zoviana amintsika intsony Rafanomezantsoa Jean Nirina, filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy sady filoha tale jeneralin’ny orinasa mpitsabo Malagasy FITRAMA.
Sata mifehy ny asa Ahiana hampikorontana
Nanomboka ny volana novambra 2020 ny Randrana sendikaly no nikirakira ny tokony hanatsarana ny sata mifehy ny asa eto Madagasikara, hoy ny sekretera jeneralin’izy ireo, Barison Rakotomanga.
Asan-dahalo sy fanadiovana omby halatra Olona 6 nidoboka am-ponja vonjimaika
Olona telo nahiditra am-ponja noho ny fanadiovana omby halatra tany Mandoto. Miady mafy amin'ny asan-dahalo ny zandary ao Mandoto ary mikaroka hatrany ambony latabatra,
Nanazava ny Jirama Hisorohana fitambarany be ny "Facture estimée"
Hisorohana ny "cumul de consommation" na ny fitambaran'ny vidin-jiro ka mahatonga ny mpanjifa ho voatery mandoa vola be indray mitontona no antony nametrahana ny "Facture estimée", hoy ny Jirama.
Tezitra mafy i Zatia Rocher “Tsy noraharahiana sy nohambanian’ny polisy aho”
Araka ny horonantsary naparitany tamin’ny tambajotran-tserasera omaly, dia nilaza I Zatia Rocher, fa nanantona ny farmasia Malagasy iray teo Analakely.
Valanjavaboahary Tsimbazaza Hisy fiovana ny vidim-pidirana
Namoaka Fanambarana ny fiadiadian’ny Valanjavaboahary etsy Tsimbazaza, fa araka ny tapaka tao amin'ny fivorian'ny Filankevim-pitantanan'ny Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza
MPIASAN’NY KAOMININ’I TOAMASINA “Tara lava ny karama, esory ireo manaonao foana”
Tara lava ny karaman’ireo mpiasa eo anivon’ny kaominina ambovohitr’i Toamasina. Mahatsiaro ho tena sahirana izy ireo noho izany, antony nanaovana fitokonana omaly.